Helvetica waa la cusboonaysiiyay oo dhashay, Helvetica Hadda | Hal-abuurka khadka tooska ah
Helvetica waa la cusboonaysiiyay oo way dhalatay, Helvetica Hadda
Iris Gamen | 28/03/2022 22:00 | Design Graphic
Isha nooca nooca, oo ay naqshadeeyeen Max Miedinger iyo Edouard Hoffman, Helvetica, waa la beddelay Sannado badan oo taariikh ah ka dib, taas oo maanta waxaan u naqaan Helvetica Hadda. Wax ka beddelkii ugu dambeeyay ee farta lagu sameeyo waxay ahayd 1982, markii loo beddelay Helvetica Neue.
Labadan naqshadeeyayaasha waxay ahaayeen aabbayaasha, dib 1957, ee nooca Neue Haas Grotesk. Afar sano ka dib, shirkadda Typeface waxay heshay xuquuqda fartan. Markaa haddaynu sidaas u eegno, waa shirkaddan ku baabtiisay magaca aynu maanta naqaanno.
Hoosta magaca, Helvetica Hadda, istuudiyaha Monotype, wuxuu abuuray qoys cusub oo weji-qorid ah Ujeeddadeedu waa in ay la qabsato isticmaalka cusub ee adduunka naqshadeynta, iyo sidoo kale shaashadaha aaladaha dhijitaalka ah ee kala duwan; mobilada, telefishinada, kombayutarada, iwm.
1 Far cusub ayaa dhashay: Helvetica Hadda
2 Hadda Helvetica ma loo baahan yahay?
Far cusub ayaa dhashay: Helvetica Hadda
Waxka bedelka lagu sameeyay farta qoraalka, oo ku salaysan shaqada ay qabteen abuurayaashiisa ugu waaweyn, Max Miedinger iyo Edouard Hoffmann.
Helvetica waxa ay tan iyo markaas noqotay mid ka mid ah xarfaha loogu isticmaalka badan yahay adduunka. Laakiin nasiib uma yeelan sheekadan oo dhan, Ka dib muddo waqti caan ah, Helvetica, hal daqiiqo ilaa mid kale ayaa ku dhacday isticmaalka.
Sababtan awgeed, agaasimaha shirkadda Monotype ayaa amar ku bixiyay in dib loo habeeyo dhammaan jilayaasha ay ku jiraan. Ujeedada cusboonaysiintan waxay ahayd in la gaaro qoraal cusub oo soo jiidasho leh.
Kadib go'aankaas agaasimaha Monotype, Helvetica Now ayaa dhashay. Tan version updated, waxaan ka heli 48 nooc oo kala duwan, kuwaas oo loo qaybiyey saddex qaybood, qoraal, micro iyo bandhig.
El qaab-dhismeedka yar-yar, waa mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee lagu soo bandhigay nooca noocaan ah, waa qaab xanbaarsan isbeddello qoraaleed. Sida kala dheeraynta, qaababka dabeecadda, curiyayaasha lahjadda waaweyn, iwm. taas oo taageerta in si fiican loo akhriyi karo, haddii ay ka muuqato cabbirro kala duwan oo shaashad ah.
Helvetica Hadda Muujinta, waxaa loogu talagalay in lagu waafajiyo kerning-ga marka la isticmaalayo cabbirka far waaweyn. Iyo qaabka, Helvetica Hadda qoraalka, waxa ay doonaysaa in ay fududayso akhriska Qoraallada cufnaanta badan leh.
Dhanka kale, Miisaannada ay ku jiraan Helvetica Hadda, ayaa laga helay timaha timaha, ilaa madow dheeraad ah. Taasi waa, laga bilaabo qaabayn aad u fiican, ilaa mid dhumuc weyn leh.
Sida aan bilowgii daabacaadan uga faalloonnay, qoraal-qorista waxa lagu sameeyay dib-u-qaabayn ka hor midda aan ka hadlayno.
Waxay ahayd gudaha 1983, halkaas oo la sameeyay nooca Helvetica Neue, kaas oo qaar ka mid ah jilayaasha wax laga beddelay., hagaajinta calaamadaha xarakaynta iyo xitaa dhererka.
Laakiin way la jirtay Helvetica Hadda, markii nooca Helvetica, lagu sameeyay dib-u-qaabaynta ugu weyn. Mar haddii isbeddelku noqday mid si weyn loo dareemayo, isla markaana la raadiyey far qoraal leh oo taariikh badan leh si uu ula jaanqaado waayaha aynu ku nool nahay.
mid kasta oo ka mid ah glyphs, waxay soo martay dib u habeynta iyo dib u habeynta, si loo soo celiyo asalka Neue Sans Grotesk oo la gaaro nuxurka fudud iyo akhrinta.
Hadda Helvetica ma loo baahan yahay?
typography Helvetica ayaa soo saartay nooc cusub, Helvetica Hadda. Qoraal qoraal ah oo dammaanad qaaday inay tahay ka kaliya ee aad isticmaali doonto marka aad wajahdo naqshadaha mustaqbalka codsiyada qoraalka. Far-qoraalka wax walba iyo qof kasta.
Helvetica waxay ahayd a nooca nooca la jecel yahay laakiin isla markaana ay neceb yihiin naqshadeeyayaasha badan. Waxaadna u maleyn doontaa, nooca noocaani kuma filna adduunka naqshadeynta. Hagaag, jawaabtu waa maya.
Noocaan cusub, Waxay si sax ah uga jawaabtaa tarankeeda xaaladaha hoose iyo kuwa sare labadaba. Marka lagu daro in si sax ah loo shaqeeyo, shaashadaha yaryar iyo kuwa waaweyn. Iyo si la mid ah, shaqooyinka dhijitaalka ah ama daabacan ee agabyo kala duwan.
Waxaa jira naqshadeeyayaal badan, kuwaas oo u yeera muuqaalka muuqaalka Helvetica Hadda, sida neefta hawo nadiif ah, iyo in qaybaha ay ka kooban yihiin sida hadiyad. Far-qoraalka, kaas oo leh qaabab iyo hawlo ka wanaagsan, iyo sidoo kale glyphs cusub. Waxaa loo arkaa, sida Helvetica ugu fiican ilaa maanta, lama huraan ah oo si wanaagsan dib loo habeeyay.
Mid ka mid ah sifooyinka ugu caansan ee qoraalkan waa in xarafka farda weyn R, waxaa jira xulashooyin loogu talagalay glyph. Tani sidoo kale waa kiiska farta yar ee i., kaas oo leh ikhtiyaar ka duwan calaamadihiisa xarakaynta, isagoo awood u leh inuu noqdo mid wareegsan.
Sidaa darteed, waxaa la dhihi karaa in tani redesign ayaa yimid waqtigii ugu fiicnaa. Maxaa keenay inuu noqdo qoraal-qoraal lagama maarmaan ah loogu talagalay naqshadeeyayaasha mideeya naqshad wanaagsan iyo akhrin wanaagsan iyo la qabsi.
In 2007, premiere Documentary ku saabsan Helvetica. Laga soo bilaabo wakhtigaas, waxaan awoodnay inaan aragno oo aan fahanno sida ay tignoolajiyadu u horumartay iyo dhinaceeda, isla qoraal-qodobeedka ayaa horumaraya.. Waa lagama maarmaan in xarfaha si joogto ah loogu cusboonaysiiyo warbaahinta cusub ee tignoolajiyada ee soo muuqda.
Helvetica waa mid ka mid ah kuwan xarfaha farta qoraalka ah ee inta badan loo isticmaalo nakhshad iyo meel ka baxsan goobtan. Shirkadaha iyo shakhsiyaadka danaynaya helitaanka nooca cusub labaduba waa inay lacag bixiyaan si ay u helaan shatiga.
La Soo dhaweynta wejigan cusub ayaa ahaa mid wanaagsan. Kooxdeeda naqshadeynta ayaa sheegay inay ku hanweyn yihiin natiijada kama dambaysta ah ee la gaaray. Charles Nix, oo ah agaasimaha Monotype, ayaa ka hadlay Helvetica Hadda, isaga oo sheegay in ay tahay far siinaya naqshadeeyayaasha awoodda ugu badan iyo xorriyadda hal-abuurka, marka la eego muujinta qoraalka.
Waa nooc, Isku xidho qaababkaaga kala duwan hal xidhmo si habaysan, u oggolaanaya naqshadeeyayaasha inay isku daraan, isku dhejiyaan oo xitaa habeeyaan mashruucyadooda.
Waad ku mahadsan tahay buug-gacmeedyo ballaadhan oo qaababka, naqshadeeyayaasha waxay ku haboonaan karaan macluumaad dheeraad ah, meel yar. Tani waa qodob togan, oo loogu talagalay naqshadaha shabakada iyo naqshadaha kuwaas oo lagu dari doono taageerooyinka yaryar, tusaale ahaan shaashadda smartwatch.
Waa a Fartu waxay ka shaqeysay meel eber ah, sidaa darteed waxay noqotay qoraal qoraal ah oo heersare ah. Helvetica Hadda waxay matalaysaa wax kasta oo Helvetica ay tahay. Waxay noqotay wejiga ugu jecel adduunka.
Se run bay ku sii jirtaa naqshadeeda asalka ah, iyada oo loo marayo bilicda iyo casriyaynta. Laakiin dib-u-qaabayntan, waxay soo kordhiyeen dhibco ay ku jiraan kuwa ka sii wanaagsan oo siinaya xitaa wax-qabad weyn, oo la qabsanaya waqtiyada cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Helvetica waa la cusboonaysiiyay oo way dhalatay, Helvetica Hadda